Pakistana: Miaraka Amin’ny Gawaahi Mandrava Ny Fady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2017 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Italiano, Français, русский, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Efa hatry ny ela ireo teknolojia fampahalalam-baovao sy fifaneraserana (TIC) no hita toy ny fanambaràna fiovàna erantany. Nasongadin'ny mpikaroka sasany ny fahafahan'ny TIC amin'ny fampiroboroboana, indrindra ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra ary ny fanentanana amin'ny olana ara-piarahamonina. Manana fiantraikany lehibe manerana ny tany ny tetikasa maromaro ao anatin'io sehatra io, izay manaporofo fa mety ho tena lasa zava-dehibe tokoa ny TIC.
Anisan'ireo tetikasa mikendry ny hanasongadina ny feo tena tsy heno loatra ao anatin'ny fiarahamonina pakistaney ny Gawaahi (ao amin'ny Facebook ihany koa). Mampiaraka ny TIC sy ny fikatrohana ara-tsosialy, ny vehivavy pakistaney mpikatroka roa malaza, Naveen Naqvi sy Sana Saleem no niandohan'izany. Izy ireo dia fitambarana horonantsary an-tserasera sy tantara niomerika izay mampiroborobo « ilay tantara hafa » sy ireo lohahevitra tsy dia mahaliana ny media nentim-paharazana na zara raha anokanan'izy irneyfotoana kely fotsiny.
Milaza amintsika ny zavatra asongadin'ny Gawaahi i Naveen :
Lasa zava-niseho nahatalanjona an'ireo media an-tambajotra tao Pakistana tamin'ny 2011 ilay zavatra niantomboka toy ny kinanga kely. Tsy vitan'ny hoe nisy fiantraikany teo amin'ny firenena ilay tetikasa fa lasa lohateny lehiben'ireo tambajotra sosialy iraisam-pirenena ihany koa. Taorian'ny roa vola nisiana fotsiny, tafiditra tao anatin'ny sokajy Hetsika Fanentanana amin'ny fikatrohana ara-tsosialy tsara indrindra ary Blaogy mendrika indrindra amin'ny teny anglisy an'ilay fifaninanana manandaza ampanaovin'ny radio Deutsche Welle, ny Best of Blog Awards.
Lafiny iray amin'ireo endrika tsy manam-paharoan'ilay vavahadin-tserasera ny fikirakirany ara-nomerika ireo tantara tantaraina. Efa taona maro no nisian'ny fitantaràna ara-nomerika saingy mbola tsy marin-toerana tsara izy io eo amin'ny tontolon'ny blaogy ao Pakistana. Nasongadin'ny vondrona Gawaahi io endrika an-tserasera io tamin'ny alalan'ny fitantaràna ireo tantara maro amina endrika nomerika. Mehreen Kasana, izay tena nandray anjara be tokoa dia vehivavy mpikatroka sy mpanoratra blaogy malaza vokatr'ireo sary ataony. Eo amin'ny pejy fandraisan'ny fantsona YouTube an'ilay tetikasa, tantara kely nomerika iray no mitantara ny niainan'ilay zazavavikely nandritra ny taona maro ireo famelezana nataon'ny naman'ny rainy azy, izay nitsahatra rehefa nanapa-kevitra ilay zazavavikely fa handray fitenenana.
Ankehitriny, Fikambanana Tsy Miankina mijoro ara-panjakana ny Gawaahi. Milaza ny tranonkala ofisialy fa « mikasa ny hamokatra lahatsary fijoroana vavolombelona momba ireo herisetra ateraky ny fanararaotam-pahefàna sy ireo hetsi-panentanana ho avotr'aina izy » ” . Mikasika ny mety hampanan-danja ilay tranonkala, milaza i Naveen :